Meghan Markle oo la yiraahdo Sex Sex Miyuu qarsoodiga sharka ah muujiyay? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Meghan Markle oo la yiraahdo Sex Sex Miyuu qarsoodiga sharka ah muujiyay?
Meghan Markle oo la yiraahdo Sex Sex Miyuu qarsoodiga sharka ah muujiyay?
Si kastaba ha ahaatee, qarsoodiga ayaa hadda la shaacin karaa ka dib markii uu u muuqday mid cillad weyn u ah qaybta saaxiibka iyo xiddiga tennis, Serena Williams. Meghan uurka siddeed bilood, waa inay dhalisaa inta u dhexeysa dhammaadka Abriil iyo horraanta May. Booqashooyinka ayaa ku qaylinaya jinsiga ilmaha - laakiin wareysiga Serena William ayaa hadda hoos u dhigtay fursadaha gabar. Xiddiga teniska Serena Williams Muujiyay muujintan naxdinta leh ee wareysiga lala yeeshay E! Wargeysyada, adoo isticmaalaya erayga "sheey" si ay u tixraacaan ilamaha ilmaha.
Ms. Williams iyo Meghan ayaa loo yaqaanaa inay yihiin saaxiibo dhow, xiddigta tennis-ka ayaa dhowaan billaabay qubeys ah raaxo leh oo loogu talagalay Duchess ee New York.
Mrs Williams, oo ah hooyada hal sano jir ah Olympia Ohanian, ayaa sidoo kale kula taliyay hooyooyinka cusub: "Ogow khaladaadka oo ha filanin inay noqdaan kuwo aad u fiican. Waxaan culeys weyn saarnay nafteena. "
"My saaxiibtiisa ay uur leedahay. oo waxay u eg tahay "Oh, ilmahayga waxaa laga sugayaa inay sameeyaan" oo waan fiiriyey oo kaliya iyada at oo waxaan qalbigayga iska idhi. "No, waxa uu ma" Waxaan ahay sida, "Maya, ma aad tahay" .
"Maaha sidii loo qorsheeyay.
Meghan Markle waxaa laga yaabaa in ay haysato gabadh yar oo la shaaciyay intii lagu jiray wareysi (Sawirka: GETTY)
Ms. Williams ma aysan tixraacin Meghan, laakiin si deg deg ah ayaa isku dayday in ay baddasho mawduuca ka dib markii ay u muuqatay qalad.
Sida laga soo xigtay Ladbrokes, qiimaha gabadha ayaa ka dhacday 13 / 08 ilaa 04 / 07 habeenkii.
Alex Apati oo ka tirsan Ladbrokes ayaa yiri: "Punters-ka boqorada waxay raadinayaan xayiraad, Serena waxay siin laheyd mid iyaga ka mid ah.
"Ma qaadan wax khatar iyo waxaannu ku hoos fursadaha gabadh sida. " Meghan Markle Serena" title = "Meghan Markle Serena" data-w = "590" data-h = "350" src1 = "https://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/ 106 / 590x /secondary/meghan-serena-1818625.jpg?r=1554749211363 "data-media1 =" "data-imgcount =" 1 ">
Meghan iyo Serena waxay ahaayeen saaxiibo fiican sanado badan (Sawirka: GETTY)
Meghan Markle iyo Prince Harry waxay filan doonaan ilmahooda ugu horeeya dhawr toddobaad (Sawirka: GETTY)
Xiddiga xidiga tennis-ka ayaa ku martigeliyay Meghan's da 'da yar ee qubeyska ee New York bishii lasoo dhaafay, taasoo ku kacday ku dhowaad nus milyan milyan ginni.
Munaasabad ballaaran ayaa ka dhacday Hotelka Mark, oo lagu qiimeeyay 66 000 euros habeenkii. dhinaca kore ee dhinaca bari ee Manhattan.
Meghan ayaa ku martiqaaday 17 marti-gelinta, oo ay ku jiraan Amal Clooney, oo wada-jir ahaa, kuwaas oo sidoo kale ay marti-galiyeen dhacdada.
Intii uu safarka ku marayay Apple Big, Meghan waxaa la arkay isagoo dukaamo iyo maqaayado ku leh makhaayado raaxo leh saaxiibo.
Meghan Markle wuxuu ku dhowaad 8 bilood uur leeyahay (Sawirka: GETTY)
Waxay sidoo kale safray, si ay raaxo Gulfstream G450 soo socda inuu ka New York, iyada oo safar ku wareegsan ujecel cajiib ah $ 98 500 £.
Megan iyo Harry waxay u dhaqaaqeen dhowr toddobaad ka hor intaanay imaanin ilmahooda, guriga cusub ee Frogmore Cottage.
The Duke iyo Duchess of Sussex dhameystir taabto in ay guriga cusub iyo diiwaan caawimo ee Victoria Beckham, oo hadda mas'uul ka ah shaqo ee design gudaha.
Meghan ayaa ka qaybgashay sheeko qosol leh oo ku taal New York bishii hore  26] (Sawirka: GETTY)
Fasalka II ee liiska ku qoran waxay cusbooneysiisey dayactir weyn si loogu daro xanaanada iyo guriga waayeelka.
Meghan, oo muddo dheer ka difaacay bii'ada, ayaa xitaa ku daray qaybta tamarta cagaaran ee 50 000 kaas oo bixin doona kuleyl, kulul iyo koronto.
dayactirka ayaa la filayaa inay ku kici qadar yaab leh oo 3 million £ maal-galiso canshuur, laakiin waxaa la fahamsan yahay in Duke iyo Duchess bixin doonto qurxinta gudaha.
Celine Dion: Waxay "dillaacday" nin!
VIDEO. Sanadihii 55, Franck Dubosc wuxuu soo galay jinsigiisa ugu horeeya: c